सेयर बजार – Page 20 – Banking Khabar
भार्गव विकास बैंकद्धारा बोनस प्रस्ताव, चुक्तापुँजी ५० करोड नाघ्ने
बैंकिङ खबर । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडले ५.५५५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले लगानीकर्तालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको …
बैंकिङ खबर । मंगलबार सेयर बजार ४.७७ अंकले बढेर ११९९.२७ अंकमा पुगेको छ । उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूह क्रमशः १९.७४ र ०.७ अंकले घटेपनि बैंकिङ, व्यापार, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स, निर्जिवन बीमा, अन्य र जीवन बीमा समूह क्रमशः ५.२५, …
कृषि विकास बैंक र सिडिएसि विच निक्षेप सदस्यका लागि सम्झौता, लाखौँ सेयरधनी लाभान्वित हुने
कृषि विकास बैंक लि. र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. बिच कृषि विकास बैंक लि.का शाखाहरुमा कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनीहरुका लागि हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्न सक्ने स्वीकृती सहितको सम्झौता भएको छ । सम्भौतामा बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश …
अनलाइन कारोबार प्रणालीमा सबै सेयर ब्रोकर आवद्ध, युजरनेम र पासवर्ड वितरण सुरु
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेले साउन १ गतेदेखि परीक्षण सुरु गरेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा ५० वटै सेयर दलाल व्यवसायी आबद्ध भएका छन् । ब्रोकरहरुले अनलाईनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेकाले सोमबारदेखि लगानीकर्तालाई यूजर नेम र पासवर्ड वितरण गर्ने …
बैंकिङ खबर । सोमबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । नेप्से परिसूचक १२.८४ अंकले बढेर ११९४.५० अंकमा पुगेको छ । बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स, निर्जिवन बीमा, उत्पादनमूलक, अन्य, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह क्रमशः ८.०६, १५.८८, १९.०१, १.८, १३३.५१, …
११८१.६६ अंकमा झर्यो सेयर बजार, जम्मा २४ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए
बैंकिङ खबर । आइतबार सेयर बजार ११.७३ अंकले घटेर ११८१.६६ अंकमा कायम भएको छ । फाइनान्स समूह २.९९ अंकले बढे पनि बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत्, निर्जिवन बीमा, उत्पादनमूलक, अन्य, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह क्रमशः ७.६६, ३४.५७, १३.४२, १३.७७, …
नियमित काममा फर्किए चन्द्रसिंह साउद
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चन्द्रसिंह साउद शुक्रबारदेखि पुनः नेप्से फर्किएका छन् । सरकारले बर्खास्त गरेका साउद अदालतको आदेश बमोजिम पुर्नवहाली भएका हुन् । गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले साउदलाई पुर्नवहाली गर्न आदेश दिएको थियो …
युनियन हाइड्रोको आईपिओ साउन १४ देखि खुल्दै
बैंकिङ खबर । युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साउन १४ गतेदेखि आईपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित लमजुङ जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नम्बर ८ देखि १०, वेशिसहर नपाको ५ नम्बर, सुन्रदबजारको ११ नम्बर कास्की जिल्लाको रुपा गाउँपालिका १ …
नेप्से परिसूचक र कारोबार दुवैमा गिरावट, प्राइम लाइफ प्रोमोटरको धेरै कारोबार
बैंकिङ खबर । साताको पहिलो दुई दिन बढेर पछिल्लो तीन दिन घटेको सेयर बजार ११९३.३९ अंकमा कायम भएको छ । साताभरमा नेप्से परिसूचक १.४१ अंकले मात्रै बढेको हो । गत साता परिसूचक ११९१.९८ अंकमा बन्द भएको थियो । यो साताको …
बैंकिङ खबर । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार ५.३८ अंकले घटेर ११९३.३९ अंकमा कायम भएको छ । होटल र उत्पादनमूलक समूह क्रमशः १४.६१ र ०.४६ अंकले बढेपनि बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स, निर्जिवन बीमा, अन्य, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह …
मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा : २० प्रतिशतसम्म मूल्य घट्दा मार्जिन कल नआउने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारबाट लागू हुने गरी मार्जिन कल सम्बन्धि ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सुरक्षणमा राखेको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था लागू गरेको …
बैंकिङ खबर । बुधबार सेयर बजार ५.५४ अंकले घटेर ११९८.७७ अंकमा कायम भएको छ । फाइनान्स समूह ०.७६ अंकले बढेपनि बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत्, बीमा, उत्पादनमूलक, अन्य र लघुवित्त समूह क्रमशः २.४७, २.७९, ९.७२, १४.४१, ६१.६१, २.०४, १.३८, १५.९२ …
गिरावटबाट सुरु भयो सेयर बजारको नयाँ आर्थिक वर्ष
बैंकिङ खबर । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात सेयर बजारले गिरावटबाट गरेको छ । नेप्से परिसूचक ८.०५ अंकको गिरावटसँगै १२०४.३१ अंकमा कायम भएको छ । व्यापार, फाइनान्स र अन्य समूह क्रमशः २.७९, ३.७३ र ४.५९ प्रतिशतका दरले बढेपनि बैंकिङ, होटल, विकास …
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको ११ लाख कित्ता आईपिओ खुल्यो
बैंकिङ खबर । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरले ११ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले सार्वसाधारणका लागि एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गरेको हो । निष्काशन गरिएको सेयरमध्ये, ४ प्रतिशत अर्थात …
धितोपत्र बोर्डको मापदण्ड : ५० हजारभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तामा गनिने
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्वन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छ । निर्देशिकामार्फत बोर्डले साना लगानीकर्ताको मापदण्ड तोकेको छ । बोर्डले चुक्ता पूँजी ५० हजार रुपैयाँ सम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानी लगानीकर्ताभित्र राखेको छ …